Nanery an’i Pakistan hihiboka indray ny OMS rehefa nitombo ny trangana coronavirus · Global Voices teny Malagasy
"Fihibohana mahomby" hitsongoana dia, hanaovana fitiliana ary hanokana-monina.
Voadika ny 09 Aogositra 2020 7:52 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Italiano, Ελληνικά, Español, Français, English
Polisy manao fisafoana any Pakistan. Sary tao amin'ny Wikipedia avy amin'i Akash0078. CC BY-SA 4.0.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Jona, nandefa taratasy ho an'ny faritany rehetra ao Pakistan ny OMS Sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny Fahasalamana nanambara fa tafiditra ao anaty lisitr'ireo firenena miisa 10 voalohany eto amin'izao tontolo izao ahitana ny tranga vaovao amin'ny COVID-19 isan'andro betsaka indrindra ny firenena. Taorian'ny adihevitra dia nanapa-kevitra i Pakistan fa hametraka «fihibohana somaritra» sy hametraka paikady fitiliana any amin'ireo faritra any amin'ny firenena izay heverina ho foiben'ny coronavirus.
Olona miisa 173,590 amin'izao fotoana izao no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina any Pakistan ary 3,590 no maty tamin'ilay viriosy. Nangataka ireo olom-pirenena ny governemanta mba hanaraka ny fepetra, tsy hivoaka ny trano, hanao sarotava sy hanasa tanana satria tsy afaka mandray an-tanana ny ankamaroan'ny tranga vaovao ny rafi-pitsaboana.
Raha niakatra ho 165 062 ny trangana COVID-19 taorian'ny nahitana ny tranga vaovao miisa 4 944 tany Pakistan tao anatin'ny 24 ora ary olona miisa 136 hafa no maty tamin'ity aretina mahafaty ity. Moa ve mahomby ny fihibohana somaritra ?
Nitombo ny isan'ny tranga rehefa nohalefahana ny fepetra
Tamin'ny tapaka ny volana Martsa, nanomboka nametraka ny fepetra voalohany tamin'ny fihibohana ny governemanta Pakistaney. Nilaza ny praiminisitra Imran Khan tamin'ny voalohany fa tsy afaka mihiboka tanteraka i Pakistan satria mety ho fatin'ny hanoanana ny 25%-n'ny olona izay miaina an-tokonan'ny fahantrana farahidiny. Noraran'ny governemanta ny famoriam-bahoaka, nakatona ny trano fisakafoanana sy ny hetsika andavanandro rehetra ary nohidiana ny ivontoeram-pampianarana hatramin'ny 15 Jolay, raha mbola misokatra kosa ny fivarotana entana ilaina andavanandro isankarazany, ny fivarotana legioma sy voankazo ary ny toeram-pivarotam-panafody.
Ny 10 May, roa herinandro talohan'ny Eid, fankalazana Islamika aorian'ny Ramadany, nanalefaka ny fihibohana ny governemanta taorian'ny fitakiana nataon'ny tontolon'ny fandraharahana mba hanalefahan'ny governemanta ny fepetra. Namoaka fanamarihana Suo Motu (fanamarihan'ny mpitsara rehefa mahatsikaritra fa misy ny tombontsoam-bahoaka nefa tsy misy antoko mangataka momba izany) ny Fitsarana Tampony any Pakistan ary nanome baiko ny governemanta hanokatra indray ireo trano fivarotana manerana ny firenena.
Nahitana tranga vaovao miisa 520 ary maty miisa 17 tao anatin'ny 24 ora tao Pakistan. Tsy vonona ny hanalefaka ny fihibohana isika. Ny fanjakana, araka izany dia nanome tombontsoa ny hevitra ara-toekarena manoloana ny ain'ny olona maro.
Mihevitra ny Fikambanan'ny Mpitsabo any Pakistan fa tokony ho matotra kokoa ny governemanta misahana ny tsimokaretina ary tokony hamerina hijery ny fanapaha-kevitr'izy ireo ny Fitsarana Tampony. Manahy ireo dokotera fa tsy manana fotodrafitrasa ampy hiatrehana ireo marary ny firenena raha toa ka misafidy ny hanery ny fahazakana aretina ho an'ny daholobe ny fanjakana.
Rehefa nohalefahana ny fihibohana dia nangatahana ny besinimaro mba “ho olom-pirenena tompon'andraikitra sy maranintsaina”; na izany aza, nirohotra hiantsena Eid ny olona an'arivony ary nandika ny fepetra rehetra. Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ireo mpiantsena, tsy nino ny fisian'ny coronavirus izy ireo.
🚨🚨🚨🚨#Peshawar Sadar Bazar today
Fanamarihana: Peshawar no tanàndehibe mitarika amin'ny fahafatesana noho ny # COVID__19 ao #Pakistan, ahitana tranga miisa 80 mihoatra isan'andro taorian'ny fanalefahana ny fihibohana.
Taorian'ny iray volana nisokafana, nahatratra 100 000 ny tranga tao Pakistan izay nanery mafy ny rafi-pitsaboana.
Afa-maminavina ny tendro ianao raha nandray ny fepetra ilaina (fihibohana, fanaovana fitiliana maro, ary ny tsongodian-kasoka sns).
Tsy nanaraka intsony ireny dingana ireny i Pakistan, miovaova isam-bolana noho izany ny isa faratampony.
Araka ny efa niheverana azy dia nanomboka niakatra ny isan'ny tranga ary nanamarika ny taratasy avy amin'ny OMS fa tsy ampy ny fitiliana nataon'i Pakistan ary tsy maintsy mampiakatra ny isan'izany izy ireo. Nisioka momba izany i Bilawal Bhutto, Filohan'ny Antokom-bahoaka Pakistaney :
Nilaza ny ahiahiny sy nanolotra sosokevitra ny taratasin'ny OMS ho an'ny governemanta Sindh. Horesahin'n govt Sindh izany mialoha ny hampiharana azy eo amin'ny sehatra nasionaly. Efa ela izahay no nitaky ny politikam-pirenena mba hifandray amin'ny zava-misy sy amin'ny fahafahana miatrika izany manokana. Saingy hatramin'izao dia tsy mbola nisy ny fandraisana andraikitra nasionaly.
Nampitandrina tao amin'ny antsafa ho an'ny mpanao gazety ny Minisitry ny Drafitra, ny Fampandrosoana ary ny Hetsika Manokana, Asad Umar, fa mety hitombo avo roa heny ny tranga COVID-19 amin'ny faran'ny volana ary mahatratra 1 tapitrisa ka hatramin'ny 1,2 tapitrisa ny faran'ny volana Jolay raha toa ka tsy manaraka ny fepetra fisorohana ny besinimaro.
Fampiharana ny fihibohana mahomby
Nampisy fisavorovoroana sy olana ny fanapahan-kevitra noraisin'ny governemanta Pakistaney tamin'ny herinandro lasa teo momba ny fampiharana ny fihibohana ‘voafaritra’ sy ‘somaritra’. Fitsongoana dia, ny fanaraha-maso, ny fitiliana ary ny fanokana-monina niaraka tamin'ny fanampian'ny sampan-draharahan'ny fiarovam-pirenena nasionaly mba hampiatoana ny fihanaky ny coronavirus no anton'ny fihibohana mahomby. Ny hamehy ny faritra ahitana olona maro tratran'ny tsimokaretina nefa sady manalefaka ihany ny famerana ara-toekarena araka ny fepetra SOPs no tanjona. Saingy niady hevitra momba io fanapahan-kevitra io ny mpiseran'ny tambajotra sosialy satria mihevtira izy ireo fa tokony hihiboka tanteraka i Pakistan.
“Tsena mihidy ny Asabotsy sy Alahady fa misokatra ny andro sisa”
Tsy voafehy intsony ny corona rehefa tonga tany Pakistan;)
Miatrika olana amin'ny fampiharana ny fihibohana mahomby ny faritany sasany toa an'i Sindh, noho ny tsy fisian'ny loharanom-bola sy ny mpiasa ary ny tsy fifankahazoan-kevitra eo amin'ny vahoaka.
Taorian'ny taratasy avy amin'ny OMS, nanomboka namerina nihiboka indray ny faritany rehetra tany amin'ireo faritra izay betsaka tranga coronavirus. Manaraka ny paikady amin'ny fitsongoana dia, ny fanaovana fitiliana ary ny fanokana-monina ny governemanta, taorian'ny arofenitra henjana nomen'ny OMS ary mampiasa teknolojia, mpitandro ny filaminana ary ekipa mpirotsaka an-tsitrapo ihany koa mba hanampy amin'ny famaritana ny fanarahana ny fepetra.